Daaweynta - Vondt.net
Kaydinta Qaybta: Daaweynta
Daaweynta 'Alzheimer' cusub waxay soo celineysaa shaqadii xusuusta oo buuxda!
25 / 02 / 2016 /5 Comments/i daaweynta, cilmi, tayada Articles/av waxyeelladayda
Baarayaasha Australiyaanka ah waxay wax weyn ka qabteen daaweynta cudurka Alzheimer. Adoo adeegsanaya qaab jilicsan oo daaweyn ah, waxay ku guuleysteen inay soo celiyaan xusuusta iyo shaqada garashada. Farxad leh! Daraasada xayawaanka ee lagu sameeyay daaweynta cusub, boqolkiiba 75 jiirka ayaa dib u helay shaqadooda xusuusta.
- Ultrasound oo lagu daaweeyo huurada maskaxda
Baarayaasha waxay heleen hab ah daaweynta aaladaha shucaaca ee aan firfircoonayn kaas oo nadiifiya maskaxda huurada amyloid - walax neerotoksis ah oo ka kooban aluminium silicate iyo peptides amyloid. Huuradan waxay ka samaysan tahay agagaarka unugyada neerfaha ee maskaxda waxayna aakhirka u horseedi kartaa calaamadaha caadiga ah ee cudurka Alzheimers, sida xusuusta lumay, shaqada xusuusta og shaqada garashada oo liidan. Noocan huurada ah (oo sidoo kale loo yaqaanno huurada dareeraha ah) ayaa ku urursan kara inta u dhexeysa neerfayaasha iyo dhammaadka sidii buurbuur molecule-beta-amyloid - taas oo ah borotiinka laftiisa sameeya huurada.
- Wuxuu daaweeyaa huurada, laakiin ma daaweynayo isku soo ururinta neurofibrillary
Sababta labaad ee cudurka Alzheimers waa Ururinta neurofibrillary. Tan dambe waxaa sababa borotiinka xarig cilladaysan ee neurons-ka maskaxda. Sida huurada amyloid, kuwanu waxay waliba isu urursadaan waxayna sameeyaan tiro aan lagamamaarmayaan. Tani waxay keenaysaa waxyeelo dhismayaasha loo yaqaan microtubules waxayna u keentaa inay noqdaan kuwo cilladaysan, taas oo iyaduna keenta hoos u dhaca gaadiidka nafaqooyinka muhiimka ah. Ka fikir sida inaad maroojinayso oo aad jiidanayso tuubada faakiyuumka - ka dibna way adkaan doontaa inaad wax soo jiidato iyo xaashi. Nasiib darrose, dawo uma lahan qaybtan Alzheimers, laakiin waxay u muuqataa inay waxyaabo waaweyn dhici doonaan.
- Daaweyn hore looma helin cudurka Alzheimers
Cudurka guud ee Alzheimers wuxuu ku dhacaa ku dhowaad 50 milyan oo qof oo adduunka ah. Markii hore, daawo fiican looma helin cudurka, laakiin hadda waxay u muuqataa inay wax ku dhow yihiin inay dhacaan. Sidaan soo sheegnay, cudurka Alzheimers waxaa sababa labo shay:
Haddana waxay umuuqataa in qofku daweyn karo kan hore dadka waqti gaaban gudaheed. Waa inaan xasuusnaano in daraasadda la sameeyay ay ku jirtay jiirarka, sida heerarkii hore ee daaweyn kale, laakiin waxay umuuqataa runtii rajo.
- Diirad saarista daaweynta ultrasound
Daraasadda waxaa lagu daabacay Caafimaadka Daawada Sayniska iyo daraasadda, cilmi baarayaashu waxay sharraxayaan sida ay u isticmaaleen nooc gaar ah oo ultrasound ah oo loo yaqaan 'ultravised therapeutic ultrasound - where Mowjadaha dhawaaqa aan-baahinta lahayn waxaa loo kala qaadaa unugyada maskaxda ee dhaawacmay. Iyada oo loo marayo oscillation-dhakhso badan, hirarka dhawaaqa ayaa gacan ka geysan kara in si tartiib ah loo furo caqabadda maskaxda-dhiigga (lakab ka ilaaliya maskaxda bakteeriyada iyo wixii la mid ah) iyo kicinta dhaqdhaqaaqa maskaxda. microglial. Kuwa dambe ayaa ah, in si fudud loo dhigo, unugyada qashin-ka-saarista - oo ay ku dhaqaajiyaan kuwan, daraasaddu waxay muujisay in maadooyinka beta-amyloid ee waxyeellada leh la nadiifiyey (eeg sawirka kore), iyo sida aan xusuusanno, kuwani waa sababta calaamadaha ugu xun. cudurka Alzheimers.
- 75 boqolkiiba dadka la daweeyey waxay ahaayeen kuwo gebi ahaanba caafimaad qaba
Daraasadu waxay soo warisay horumarin dhammaystiran boqolkiiba 75 boqolkiiba jiirka ay ku isticmaaleen daaweynta - iyada oo aan wax saameyn ah ama waxyeelo ah u lahayn unugyada maskaxda ee u dhow. Horumarka waxaa lagu cabiray sadex imtixaan: 1. Labyrinth 2. Aqoonsiga walxaha cusub 3. Xusuusta meelaha ay tahay in laga fogaado.
- Daaweyn daawo la'aan
Daaweynta cudurka Alzheimers oo aan dawo lahayn, oo xaalado badan ay ku yeelan karaan saami aad u sareeya oo waxyeelada leh, ayaa ah mid aad u xiiso badan.
- Daraasaadka Aadanaha ee 2017
Jürgen Götz oo ka mid ah cilmi baarayaasha ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inay ku guda jiraan bilaabista daraasado cusub oo xayawaanka ah - oo ay ku jiraan adhiga. Iyo inay rajeynayaan inay bilaabaan daraasado ku saabsan aadanaha horeyba 2017-2018 haddii wax walba ay ku socdaan sidii loogu talagalay.
Sidoo kale aqri: - Sanjabiisha waxay yareyn kartaa waxyeelada istarooga
Sidoo kale aqri: - 5 faa iidooyin caafimaad ayaa laga helay samaynta looxa
Sidoo kale akhri: - Daaweynta noocyada cusub ee kansarka jilicsan ayaa beddeli karta daaweynta shucaaca iyo kiimoteraabiga!
(Raac oo faallo ka bixi haddii aad jeceshahay inaan sameyno fiidiyow leh daaweyn gaar ah, jimicsi ama faahfaahinta sida dhabta ah arrimahaaga)
(Waxaan ka jawaabeynaa su'aalaha laxiriira caafimaadka SI AAD SI LACAG LA'AAN AH! Isticmaal boggayaga SU'AAL - HELI JAWAAB ama farriin noogu soo dir Facebook
Suugaanta ku habboon:
On Pluto: Gudaha Maskaxda Alzheimers« waa sawir adag oo laga helo cudurka Alzheimers iyo la noolaanshaha adiga oo aan ka quusan. Buugga waxaa qoray suxufiga, Greg O'Brien, kaasoo ku sifeynaya sharraxaad aad u wanaagsan iyo waaya-aragnimada shaqsiyeed inuu kugu sii marayo tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah iyo cudurka Alzheimers.
Leinenga, G. & Götz, J. Sawirka muuqaalka dhawaaqa dheer wuxuu ka takhalusaa amyloid-β wuxuuna soo celiyaa xusuusta qaab muusigga cudurka Alzheimers. S cience Transal Medicine Maar 11, 2015: Xaddiga 7aad, Cadadka 278.
Sawirada: Wikimedia Commons 2.0, FreeStockPhotos, tabaruca akhristaha
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Alzheimers.jpg?media=1648573622 630 1200 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-02-25 21:27:382022-03-18 17:23:21Daaweynta 'Alzheimer' cusub waxay soo celineysaa shaqadii xusuusta oo buuxda!
Cirbadaha 'Acupuncture' ayaa Caawin Kara Fibromyalgia
19 / 12 / 2016 /0 Comments/i daaweynta, fibromyalgi/av waxyeelladayda
Akhbaar wanaagsan oo loogu talagalay dadka dhibaataysan fibromyalgia. Daraasad weyn oo lagu daabacay BMJ (British Medical Journal) waxay muujisay in acupuncture (irbadda daaweyntu) ay bixin karto yareynta xanuunka iyo hagaajinta waxqabadka ee loogu talagalay kuwa ay saameysay cilad-xannuunkan unugyada rheumatic. Daraasad kale oo cilmi baaris ah (1) waxa kale oo ay taageertay in acupuncture-ka muruqa intramuscular-ku uu xanuunka ka yarayn karo kuwa qaba fibromyalgia - iyo in ay kaa caawin karto in la xakameeyo isticmaalka xanuunka baabi'iyaha. Haddii kale, waxa kale oo muhiim ah in la sheego in foomka acupuncture ee loo isticmaalo daraasadda aan halkan ku tixraaceyno uusan la mid ahayn qaabka kale ee akupuncture ee Shiinaha.
- Waaxyadayada edbinta ee Vondtklinikkene ee Oslo (Lambertseteriyo Viken (Eidsvoll Sound og Råholt) Dhakhaatiirteenu waxay leeyihiin aqoon sare oo xirfadeed oo gaar ah xagga qiimaynta, daaweynta iyo tababarka baxnaaninta ee xanuunka xanuunka daba dheeraada. Guji linksyada ama iyada si aad wax badan uga akhrido waaxyadayada.
Xor ayaad u tahay inaad la wadaagto maqaalkan haddii adiga ama qof aad taqaanid uu ku dhaco 'cudurka aan la arki karin'. Ma leedahay talo bixin Adeegso aagga faallooyinka ee hoos ku yaal ama annaga Facebook Page.
Fibromyalgia waa cudur caafimaad, cudurka laabotooyinka oo lagu garto xanuun daba dheeraada, xanuun baahsan iyo dareenka cadaadiska oo kordha maqaarka iyo murqaha. Fibromyalgia waa cudur si heer sare ah u shaqeynaya oo ku lug leh xanuun daba dheeraada. Sidoo kale waa wax caadi ah in qofka uu ku dhaco daal, dhibaatooyin xagga hurdada ah, khafiifinta xumaha iyo dhibaatooyinka xusuusta. Calaamadaha si weyn ayey u kala duwanaan karaan, laakiin astaamaha lagu garto waa xanuun weyn iyo xanuun gubanaya murqaha, ku xirnaanta muruqyada iyo kala goysyada. Waxaa loo kala saaraa mid xanuunka rheumatic.
Sababta fibromyalgia wali si buuxda looma oga. Waxaa la aaminsan yahay in ay jiri karaan arrimo la iska dhaxlo oo ay weheliyaan saamaynta epigenetic ee ka dambeeya ogaanshaha cudurka. Sababaha suurtogalka ah sida caabuqyada, dhaawacyada iyo walbahaarka daba-galka ah ayaa sidoo kale lagu sheegay suurtogalnimada.
Xiriirka ka dhexeeya fibromyalgia iyo dhaawacyada ama caabuqa ayaa sidoo kale la baarayaa. Waxyaabaha kale, waxaa lagu sheegaa in qoorta jeexan tahay cunsur u horseedi kara xanuunka fibromyalgia. Fursadaha kale ee aan soo sheegnay waa Arnold-Chiari, dhegaha ilmo galeenka, larynx, mycoplasma, lupus, fayraska Epstein Barr iyo caabuqyada neef-mareenka.
Daraasad: Horumar aad u weyn ka dib 10 Asbuuc oo Daaweynta ah
Daraasadu waxay barbar dhigtay daaweynta dhabta ah ee acupuncture (halkaas oo irbado dhab ahaantii la geliyey) 'daaweynta cirbadaha placebo' (halkaas oo aan cirbado la gelin, laakiin kaliya tuubooyinka caaga ah ayaa la isticmaalay) - waxaa jiray wadar ahaan 153 ka qaybgalayaasha labada kooxood. Kooxaha bukaanku waxay heleen 1x daawaynta todobaadkii ilaa 9 toddobaad. Kooxda heshay daawaynta cirbadda, 41% horumar ayaa la ogaaday 10 toddobaad ka dib - saamayntani waxay sidoo kale ahayd mid aad u wanaagsan xitaa 12 bilood ka dib dhammaadka daawaynta iyo horumar muddada dheer ah ee 20% ayaa la soo sheegay - hal sano ka dib daawayntii ugu dambeysay . Tani waa tii ugu horeysay, cilmi baaris ballaaran oo lagu qiyaaso saameyntan wanaagsan - cilmi-baarayaasha laftoodu waxay aaminsan yihiin in tani ay sabab u tahay naqshadaynta iyo qorshe daaweyn wanaagsan. Si kale haddii loo dhigo - war aad u wanaagsan oo loogu talagalay kuwa uu saameeyay cilladaan.
Laakiin sidoo kale waxaa muhiim ah in la ogaado in qofku uu u dulqaadan karo daaweynta marka qofku qabo fibromyalgia - iyo in ay qaadatay sagaal daaweyn si loo gaaro hagaajinta ay tixraacayaan.
Sidee Loogu Daaweeyaa Daaweynta Cirbida Muruqnimada Fibromyalgia?
Fibromyalgia waxay keentaa dareenka dhexe iyo korodhka calaamadaha dareemayaasha. Tani waxay ka dhigan tahay, waxyaabo kale, in xanuunka si xad dhaaf ah looga soo sheego maskaxda iyo in xitaa raaxo la'aan iyo xanuun yar ay la kulmi karaan xanuun aad u xanuun badan. Adigoo isticmaalaya daawaynta cirbadda murqaha ee murqaha xasaasiga ah, qofku wuxuu la kulmi karaa dhowr saameyn jireed - oo ay ku jiraan:
Ka-go'ida Calaamadaha Xanuunka
Sunta murqaha yar iyo waxtarka
Yaraynta Tissue dhaawacan iyo Bogsiinta oo kordhay
Waxaa la rumeysan yahay in hoos u dhaca xanuunka qeyb ahaan ay ugu wacan tahay hoos u dhaca dhaqdhaqaaqa korantada ee muruqyada dhexdooda - sidaasna ay ku yar tahay calaamadaha xanuunka ee loo diro maskaxda.
Gunaanad: Qalabka Faa'iidada Leh ee lagula dagaallamo Fibromyalgia
Acupuncture iyo acupuncture waxaa sameeya dhowr dhakhtar caafimaad, oo ay ku jiraan acupuncturists, chiropractors, physiotherapists iyo manual therapists - laakiin waxaan u maleyneynaa inay muhiim tahay inaad heshid daaweeyaha saxda ah sidaas darteedna kaa caawinaya inaad hesho mid ka mid ah daaweeyayaasha lagula taliyay aaggaaga haddii aad rabto.
Daaweynta cirbadda ayaa kaa yareyn karta xanuunka waxayna kaa caawin kartaa inaad dabaciso murqaha aan shaqeynin iyo unugyada jilicsan - taas oo inta badan wax weyn ka geysata xanuunka fibromyalgia. Si kastaba ha noqotee, waxaan kugula talineynaa in lagu daro dhowr farsamooyin daaweyn ah oo loo yaqaan inay saameyn ku yeeshaan fibromyalgia - sida daaweynta jireed, abaabul wadajir ah iyo daaweynta laser.
Is-daaweynta: Maxaan sameyn karaa xitaa xanuunka fibromyalgia?
Waxaa jira waxyaabo yar yar oo ka dhiga albaab-u-mayl sida ugu dheer una dheer illaa fibromyalgia. Maalmaha xun, xitaa ka soo kabashada sariirta waxay dareemi kartaa jimicsi. Waxaan kugula talineynaa inaad dhageysato jirkaaga, laakiin inaad had iyo jeer isku daydo inaad hesho xoogaa dhaqdhaqaaq ah iyo jimicsi inta lagu jiro maalinta - muruqyadaada ayaa kaaga mahadcelin doona mustaqbalka fog. Dad badan ayaa la kulma nafis xagga jimicsiga guriga oo la waafajiyay kuwa qaba fibromyalgia (fiiri fiidiyowga iyada ama ka hooseeya). Kuwa kale ayaa taas dareemaya tababarka barkadda biyaha kulul, yoga ama duuliyaha ayaa saameyn wanaagsan ku leh kuwa silica keena. Mid ayaa waliba isticmaali kara kubbadaha bartilmaameedka / duugista maalin walba ama derin acupressure (hoos eeg). Haddii kale, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa mid isku darka gasket kulul / qabow.
Talooyin 1: derin acupressure (Xiriirka wuxuu ka furmay daaqad cusub)
Fibromyalgia waxay ku xiran tahay kororka murqaha muruqyada iyo myalgias ballaaran oo jirka ah. Qoorta iyo garbaha gaar ahaan inta badan si adag ayaa loo garaacay. Waxaan inta badan ku siin talooyin ku saabsan isticmaalka derin acupressure sida is-qiyaasta wanaagsan ee looga hortagayo kacsanaanta muruqa ee muhiimka ah. Sariirta iyo fadhiga madaxa ee lagu daray waxay si fiican uga shaqayn karaan nasashada marka jidhku dareemo. Guji sawirka ama iyada si aad wax badan uga akhrido.
- Nagala soco YouTube
HALKAN KA AKHRISO: 6 Jimicsiyada Adkeynta Loo Sameeyay ee loogu talagalay Kuwa Fibromyalgia leh
- Nagala soco Facebook
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan acupuncture iyo Fibromyalgia
Ma halisbaa in lagaa helo acupuncture markii aad qabtid fibromyalgia?
Maya, ilaa iyo inta aad ka helayso daawaynta irbadda takhtar si guud loo oggol yahay, tan waxaa loo arkaa nooc daawaynta ah oo aad ammaan u ah. Midda ugu badan ayaa ah in acupuncture-ka-muruqa intramuscular uu sameeyo takhtar si guud loo oggol yahay - sida lafopractor casri ah. Laakiin waa in maskaxda lagu hayaa in fibromyalgia uu keeno dhaqdhaqaaqa murqaha oo aad u sarreeya - iyo in qofku uu sidaas noqon karo mid aad u jilicsan oo jilicsan daaweynta ka dib.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/akupunktur-lindre-fibromyalgi.jpg?media=1648573622 368 700 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-12-19 20:03:352022-03-16 16:29:03Cirbadaha 'Acupuncture' ayaa Caawin Kara Fibromyalgia
Bogga 1 ee 22123>»